प्राइम लाइफको १ः१.६ कित्ता हकप्रद शेयर जारी | गृहपृष्ठ
Home लगानी प्राइम लाइफको १ः१.६ कित्ता हकप्रद शेयर जारी
फागुन ९, काठमाडौं (अस) । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले १ बराबर १ दशमलव ६ (१ः१.६) को अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्दैछ ।
कम्पनीले हकप्रद शेयर फागुन २७ गतेदेखि खुल्ला गर्ने भएको छ । निष्कासन बन्द भने २०७५ बैशाख २ गते रहेको छ । कम्पनीले शेयरधनीका लागि प्रति शेयर एक सय अङ्कित दरको ९७ लाख ६३ हजार २ सय कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब पु¥याउन निर्देशन दिएपछि पूँजी वृद्धिको लागि कम्पनीले हकप्रद जारी गरेको हो ।
कम्पनीको फागुन १७ गतेसम्म शेयर किन्ने वा शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनीहरुले हकप्रद खरीदको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । हकप्रद शेयर खरीदका लागि कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
यसका साथै प्राइम लाइफको सम्पूर्ण शाखा र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आस्वा सेवामा सहभागी भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट हकप्रद शेयर खरीद तथा आवेदन बुझाउन सकिन्छ । कम्पनीको हालको चुक्तापूँजी रू. ६१ करोड २ लाख रहेको छ । कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्कासन तथा बाँडफाँटपछि चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख २० हजार पुग्नेछ ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको नाफा रू. ११ करोड ५१ लाख पुगेको छ । यस वर्ष कम्पनीले बीमा शुल्कबाट रू. १ अर्ब २ करोड २६ लाख आर्जन गरेको छ । कुल कायम रहेको बीमालेखको सङ्ख्या ५ लाख ३० हजार ५ सय ९१ पुगेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३७ दशमलव ७६, मूल्य आम्दानी अनुपात ४५ दशमलव ८२ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय ६६ दशमलव ५६ रहेको छ ।